माघे संक्रान्ती कप शुरु, लेटाङको विजयी शुरुवात – Khel Dainik
माघे संक्रान्ती कप शुरु, लेटाङको विजयी शुरुवात
बेलबारी (खेलदैनिक) । शुक्रबारदेखि शुरु माघे संक्रान्ती कप नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा लेटाङ फुटबल क्लब, मोरङले प्रभावशाली जितका साथ विजयी शुरुवात गरेको छ ।
बेलबारी–१ स्थित नक्सलबारी खेलमैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा लेटाङले घरेलु टोली नक्सलबारी फुटबल क्लबलाई शून्यका विरुद्ध ३ गोलले हरायो । खेलको ४२औं मिनटमा बिजय भुजेलको गोलबाट लेटाङले खेलमा अग्रता लिएको थियो ।
५७औं मिनटमा भुवन राईले त्यो अग्रता दोब्बर पारे । लगतै ६२औं मिनटमा उमेश कार्कीले तेस्रो गोल गर्दै लेटाङको प्रभावशाली जित पक्का गरे । खेलको म्यान अफ द म्याच लेटाङ कै बिजय भुजेल घोषित भए ।
उद्घाटन खेल प्रतियोगिताको पहिलो क्वाटरफाइनल खेल समेत भएकाले जितसँगै लेटाङ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । प्रतियोगिता अन्तरगत पुष २५ गते शनिबारको खेल डाँगीहाट फुटबल क्लब र तालतलैया फुटबल क्लबबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
यसअघि प्रतियोगिताको उद्घाटन एक र्काक्रमका बीच मोरङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र धिमालले गरेका थिए । नेपाल मगर संघ, मोरङको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद ५१ हजार हात पार्नेछ भने उपविजेताले ४१ हजार प्राप्त गर्नेछ ।
त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कुल आठ टोलीहरुको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने आउँदो माघ १ गतेका दिन हुनेछ ।
← नव जनजागृती युवा क्लबको अध्यक्षमा लामा सागकी स्वर्णधारी पार्वतीलाई स्वर्ण →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने पुष २४, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? पुष २४, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली पुष २४, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा पुष २४, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित पुष २४, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा पुष २४, २०७७